Wakiilka Midowga Yurub ee Soomaliya iyo wafti uu hogaaminayo oo Garowe soo gaaray – Radio Daljir
Oktoobar 21, 2012 5:47 b 0
Garowe, Oct 21 – Wakiilka cusub ee Midowga Yurub u qaabilsan arimaha Soomaaliya Amb. Caravano De Urso oo shalay waraaqihiisa aqoonsiga u gudbiyay madaxwaynaha dowladda faderaalka Soomaaliya ayaa maanta soo gaaray magaalada Garoowe.
Wafdi balaaran oo uu hogaaminayo danjiraha ayaa waxaa kusoo dhoweeyey magaalada Garowe madaxwaynaha dowladda Puntland Dr Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Faroolle iyo xubno ka mid ah golihiisa xukuumadda.
Madaxwaynaha Puntland Dr. Cabdiraxmaan Faroolle iyo danjire Caravo De Urso ayaa kulan albaabada u xiran ku qaataay xarunta madaxtooyada, markii uu soo dhamaaday ayaa labada masuul shir saxaafadeed ay si wadajir ah u qabteen ku faahfaahiyay waxa ay isla soo qaadeen kulankooda intii uu socday.
Madaxwaynaha Puntland C/raxmaan Sheekh Maxamed Faroolle oo ugu horayntii hadlay ayaa sheegay wafdiga inay isla soo qaadeen taageeridda ciidamada badda Puntland ee la dagaalanka burcadbadeeda iyo dib u dhiska adeegyada guud, isagoona soo dhoweeyey magacaabista safiirka cusub.
Wakiilka Midwga Yurub? Crevano De Urso oo isagana hadlay ayaa sheegay inay isku afgarteen madaxda Puntland arimaha la dagaalanka burcadbadeeda.
“Waxaa aan marka ugu horaysa wada hadal buuxda kala yeelanay, aan iska dhagaysanay dib u dhiska gobolka,? waxa aan madaxda Puntland ka dhagaysanay baahiyaha taagan sida loogu jawaabi karo, waxa aan sidoo kalle jeclahay inaan fursadan ku sheego inaan isfaham buuxda ka yeelanay burcadbadeedda” ayuu yiri danjire Caraveno De Urso.
Midowga Yurub ayaa sidoo kalle sheegay in bilaha soo socda ay Puntland ka hirgalin doonaan barnaamijyo kalle duwan oo ay isla soo qadeen madaxwaynaha Puntland Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Faroolle.
Shalay ayay ahayd markii danjire Carevano De Urso si rasmi ah waraaqihiisa safriirni uu u gudoonsiiyay madaxwaynaha cusub ee Soomaaliya kadib socdaal uu ku tagay magaalada Muqdisho.